Antontan-taratasy diovina madio amin'ny Gimp | Avy amin'ny Linux
Antontan-taratasy diovina madio amin'ny Gimp
Christopher castro | | famolavolana, GNU / Linux, Tutorials / Manuals / Tips
Ato amin'ity mini tutorial ity dia hasehoko anao fa mora ny manadio ireo antontan-taratasy notarafina ary hahatonga azy ireo ho matihanina Gimp.
Dingana tsotra 3 fotsiny io.
1.- Sokafy amin'ny Gimp ny rakitra apetraka
2.- Ataovy avo roa heny ny sosona
3.- Ny sosona ambony ao Modo miakanjo Mitambatra granulate.
Raha ratsy kely izy io dia mamafa ny tsy fahalavorariana eo amin'ny sosona ambany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » famolavolana » Antontan-taratasy diovina madio amin'ny Gimp
Mora, tsotra ary tsara! Misaotra 🙂
Eny tokoa, mamiratra ilay lahatsoratra 😀
Misaotra ihany koa tamin'ity fidirana ity.
JosueB dia hoy izy:
Tsara, zavatra iray hafa amin'ny fahalalantsika sy mahaliana antsika amin'ny fotoana iray ihany !! 😉
Valiny tamin'i JosueB
Tsara, mametraka Gimp aho 😛
Torohevitra tena azo ampiharina nefa tsy isalasalana!
fmonroy07 dia hoy izy:
Tena tsara, azo ampiharina ary mahomby.
Valiny amin'ny fmonroy07
Ilaina izany. Hampiasa azy io aho anio.
Christopher nitifitra 10 ianao, izany hoe EXCELLENT. Indraindray ho an'ny asa ary koa ny fananana antontan-taratasy nomerika, ireo dia tena ratsy tarehy ary tsy dia be mpahalala nefa miaraka amin'izany, RAHALAHY LUXURY.
Misaotra amin'ny tendrony.
Tena tsara, saingy misy ny olana: Ahoana no hahazoanao pdf madio miaraka amin'ny valiny?
Nanomboka nanao fitsapana aho, ary rehefa manandrana mamonjy pdf dia tsy miseho ho safidy izany. Rehefa mitahiry azy ho ps dia lehibe kokoa ny rakitra, ary ankehitriny tsy maintsy manadihady ny fomba fampiasana ps2pdf aho, izay mandeha am-boalohany sy ny fomba fandehany dia tsy mandeha tsara, satria miafara amin'ny takelaka misy ampahany ihany amin'ilay rakitra voalohany aho ... ary lehibe kokoa koa (a na dia efa 'nodiovina' aza). Zavatra mitovy raha tahiriko ho jpg (indroa ilay rakitra tany am-boalohany). Misy fomba iray hahomby ve?
Azo aondrana mivantana amin'ny PDF izy io, saingy amin'ny maha-pejy tokana efa natambatra niaraka taty aoriana
fa mamporisika anao aho raha hanao boky na fanangonana ianao, dia aza mampiasa pdf satria tsy mahomby amin'ny fisie ireo rakitra notarafina. Mampiasà rakitra djvu tsara kokoa.
Mampalahelo fa portable kokoa ny pdfs noho ny djvu (ny olom-pantatra sasany dia tsy afaka namaky antontan-taratasy sasany tamin'ireny endrika ireny tamin'ny solosain'izy ireo).
Ary inona no fomba tsara indrindra hanaovana izay kasainao hatao? Diovy ny ravina pdf, tahirizo amin'ny jpg (na endrika hafa) ary atambohy ho djvu? Somary sarotra ny mahazo izany karazana fampahalalana izany.
Raha tadiavinao fa madio io dia mila manao fanekena lahatsoratra amin'ny sary (OCR) ianao, saingy asa kokoa io, ny scan dia tsy maintsy ho tsara ary mila fanitsiana amin'ny tanana foana izy ireo, fa amin'ity fomba ity dia avadika ho soratra ny sary (bitmap) miaraka amin'ny tombony rehetra an'ity endrika ity (habe, endrika sns)
Ity misy zavatra hanombohana:
Misaotra betsaka \_ o /
Waw, mahatalanjona !! Misaotra betsaka!!!
Tsy maintsy mianatra mamolavola script gimp aho mba hanao ireo fahagagana ireo amin'ny ankapobeny =)
Moskera dia hoy izy:
Martin izaho dia tena tsy mahalala ny gimp sy ny fampiharana toa azy fa mieritreritra aho fa mitovy aminao. Ireo boky azo hatsaraina amin'ny script tsara ... Raha misy manana ny fomba hanaovana azy, afaka manome hevitra ve ianao? Miarahaba ary misaotra betsaka noho ny fandraisana anjara, mahafinaritra.
Valiny tamin'i Moskera
Miaraka aminao sy Moskera aho amin'izany fangatahana izany: raha misy mahalala ny fomba hanaovana izany dia avelao izy ireo hilaza aminay (na hanome anay rohy vitsivitsy momba izay halehantsika).
Misy fampahalalana ao. Ary koa ny lohahevitra Script-Fu manaraka izay toy ny makrô.
Iza no te hanao ny script?
Ostias, izao aho mijery azy. Raha tsy hoe sarotra be dia manana aho amin'ity faran'ny herinandro ity.
Bennybeat dia hoy izy:
Tsy maintsy heveriko fa rehefa lasa ny fotoana dia sarotra kokoa noho ny nantenanao izany, marina? Sa efa vitanao izany ary azonao alaina ao amin'ny toeran-kafa? Tsy nahita na inona na inona momba ilay lohahevitra tao amin'ny tranonkalanao WP aho ...
Valiny tamin'i BennyBeat
Tsotra, fohy ary mandaitra ...
Wow, tsara izany 😀 iza no hilaza fa mety ho mora toy izany
@AurosZx -> Rehefa manao scanner aho dia apetrako ao ambadiky ny ravina ny karatra BLACK, amin'izay no tsy maivana izay mety ho soratana amin'ny ilany aoriana ary mavesatra ny karatra dia milamina be ny taratasy ary sorohina ny aloka.
Mega tena tsara. Tokony hitondra torohevitra bebe kokoa amin'ity karazana ity ianao ho an'ny GIMP na zavatra mitovy amin'izany aza amin'ny Inkscape
eto elav Ampy fantany ny momba ny Gimp sy Inkscape (izy no "mpamolavola antsika" haha), afaka nampianatra zavatra be dia be izy 😀
Aza manitatra .. Zavatra tsotra ihany no ataoko 😛
Eny, mazava ho azy ... avy eo hala, hampianarana antsika hanao ireo «zavatra fototra» ... HAHAHA
Miaraka amin'ny dingana kely telo fotsiny, ny valiny dia "avy amin'ny tontolo hafa"
Fantastic. Tsotra kokoa, tsy azo atao.
Hizaha maso ireo antontan-taratasy aho, hamongorana azy ireo amin'ny GIMP, ary avy eo misafidy amin'ilay fitaovana mpaka loko, misafidy isa miaraka amina tokonam-baravarana mety. Avy eo haveriko ny fifantenana ary hamafana.
Amin'izay dia tsy mila manitsy kely fotsiny ny mangarahara amin'ilay sosona ambony ary dia izay!
Misaotra ny fizarana. Indraindray ho an'ireo tsy manam-pahalalana amin'ny fanovana sary (na koa amin'ny faritra hafa) dia tsy mora ny mahatakatra ny asan'ireo fitaovana.
Tongasoa anao, misaotra nandefa ny hevitra 😀
Hahaha, tsy misy fiverenana be, fandraisana anjara tena tsara !!
Salama, mampiasa Gimp 2 aho ary manaraka ireo dingana lazainao fa tsy mahazo valiny aho, fantatrao ve ny antony mety?
Torohevitra tena tsara. Tena nanampy be ahy io, izay tena tiako. Ankehitriny, azo ampiharina amin'ny fizotran'ny batch ho azy ve ity torohevitra ity amin'ny antontan-taratasy an-jatony?
Elojah dia hoy izy:
Vitako ihany ny nihazakazaka tamin'ny dingana roa, saingy tsy nisy vokany. Tsy nisy niova ny sary, mbola misy teboka volondavenona lehibe ao aoriana.
Mikasika ilay programa, izay tsy fantatro dia tena tsara tarehy, saingy toa tsy mamela ny fitehirizana ireo sary afa-tsy amin'ny endriny manokana, izay endrika ivelany. Izany hoe mifanentana ZERO. Tsy ilaina io fa hitady foana aho.
Valiny tamin'i Elojah
Mahafinaritra. Tsotra ary miaraka amin'izay koa mahafinaritra.
Dokan dia hoy izy:
Safidy iray hafa mampiasa LibreOffice Draw (izay tsy nametrahantsika Gimp;):
1. Manokatra ny antontan-taratasy amin'ny LibreOffice Draw ianao.
2. Misafidy ny slide voalohany ianao, izany hoe ny pejy voalohany amin'ny antontan-taratasy PDF izay ao amin'ny Draw dia raisina ho toy ny sary.
3. Hamarino raha hita ny bara fitaovan'ny sary, Zahao menio> Fitaovana> Sary.
4. Ao amin'ny bara fitaovan'ny sary, safidio ny drop-down "Mode graphique", tonga amiko amin'ny alàlan'ny default amin'ny "Default" mode izy, safidio ny "Black and white".
5. Safidio ny slide na pejy manaraka ao amin'ny rakitra PDF.
6. Avereno ny 4 sy 5 mandra-pahatonganao any amin'ny faran'ny antontan-taratasy.
7. Misafidiana Menu Menu> Export to PDF.
8. Ao amin'ny "Safidy PDF" dia zahao raha tsy voafantina ny "Hampihena ny vahaolana amin'ny PDF" na apetraka amin'ny ambony indrindra, azontsika atao foana ny mampihena ny kalitao rehefa manonta. Avy eo tsindrio "Export".
Mamaly an'i Dokan
Esteban garrido dia hoy izy:
Andro tsara. Mila fanampiana aho hahazoana mpanara-maso efatra avy amin'ny distro Linux sasany. Izaho izao dia mizaha toetra ny ubuntu gnome 14. Fa tsy manana olana amin'ny fanandramana hafa. Efa nanao izany tamin'ny fandresena aho ary nanao hackintosh koa. Manana Dell 3400 sy tsiroaroa maromaro an'ny Nvidia gs, gt ary quadro graphics cards misy modely samihafa aho. Manana tabilao msi tsiroaroa koa aho. Ankasitrahako ny tari-dalana rehetra. mahafaly
Mamaly an'i Esteban garrido
Rodolfo Barreiro dia hoy izy:
Mety hahasoa raha manazava ny misy ny fitaovana ianao. ny kinovako, ubuntu mate 16.04 dia tsy manana zavatra mitovy amin'ilay lazainao. Eny, afaka mamorona sosona duplicate ianao ary avy eo ny fomba hanarahana? Inona no hisokatra ny fifanakalozan-kevitra? Ity dia fanazavana tsy misy dikany izay tsy fantatry ny manam-pahaizana Gimp irery.
Mampiasa Linux aho hatramin'ny ubuntu 9.
Valiny tamin'i Rodolfo Barreiro
wpnoa dia hoy izy:
Misaotra, nataoko araka ny nolazainao ary nivoaka tsara tokoa. izao tsy haiko ny manondrana ireo pejy 360 nahitsiko. Azafady azonao atao ve ny mitarika ahy amin'izany?
Mitranga ny nanamboarako ny Gimp fisie rakitra 360 pejy ary te-hanondrana azy ireo ho fanontana aho. Vaovao aho amin'ireo raharaha ireo. Misaotra anao.
Valio amin'i wpnoa